မမေဓာဝီ ကိုယ်စား ဖြေရှင်းချက် တင်ပေးသင့်ပြီလို့ ယူဆလို့ တင်ပြအပ်ပါတယ်။ မမေဓာဝီအနေနဲ့ သူ့ဘလော့ဂ်ကို သူ့ဆန္ဒအရ ပိတ်သိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘလော့မှာ မောင်နဲ့နှမ၊ သားနဲ့အမိ မြင်လို့မှမတော် ဆဲဆိုကြတာတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်ကြတာတွေကြောင့် ပိတ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ပွထနေတဲ့ သတင်းတချို့ မမှန်ပါဘူး။
သူ့ကိုယ်စား စိတ်ပူနေကြသူတွေ အားလုံးအတွက် မမေတယောက် ဘေးရန်ကင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းပါးချင်ပါတယ်။ မမေကို အပျင်းပြေဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်လိုလက်ရဖြစ်ဖြစ် နှောက်ယှက်ခြိမ်းခြောက်သူများလည်း တော်သင့်ပြီလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ကောလဟဠတွေကြောင့် မမေတယောက် ပိုပြီး အနေရကျပ်မှာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ အားလုံးကို တောင်းဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ အဖို့ တော့အတော်ကို စိတ်ချမ်းသာ သွားပြီကိုစေထုးရေ ၊ မမေဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော်ပါပြီ
Sep 11, 2007, 10:43:00 PM
it'sarelief...thanks for ur information...ryan
အဲဒါပြောတာ သတင်းမှားတွေကို အဟုတ်ထင် ချဲ့ ကား
ပြောနေတဲ့ခင်များတို့ ရဲ့ မီဒီယာတွေရာခိုင်နှုန်းဘယ်
လောက်ဘဲမှန်တယ်ဆိုတာ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဘဲကြည် ။
သူ ဟာသူ ကြောက်ပြီးပိတ်ထားတာကိုတောင်အာဏာရှင်များကလုပ်သလေး
ဘာလေးနဲ့့ နော်။သိဘို့ ကောင်းပြီ... အထူးသဖြင့်ဟစ်တိုင်
Sep 11, 2007, 11:05:00 PM
good! very good to know that Ma May is safe. I called u (at 10:55 pm, Tuesday) to ask about Ma May's blog. U didn't answer. I thought that u r sleeping. :)
Sep 11, 2007, 11:20:00 PM
မင်းတို့ပထွေးတွေက အာဏာအားကိုးနဲ့ ချုပ်ချယ်ချင်တိုင်း
လုပ်နေကြတာ… မင်းတို့မျက်ကန်း နောက်မြီးဆွဲသမားတွေ
Sep 12, 2007, 2:45:00 AM
တဆက်တည်းမှာမမေအတွက်စိတ်ပူမိနေသေးတယ်၊ ဟစ်တိုင်က မမေရဲ့ ကြားသမျှမြင်သမျှကို သူတို့ ဖော်ပြ
မိလို့ ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ နဲ့ သာသက်ဆိုင်ပါကြောင်းဆိုပြီး
Sep 12, 2007, 3:15:00 AM
လုံးဝမယုံဘူး။။ သတင်းတွေ ဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
Sep 12, 2007, 6:41:00 AM
မင်းမင်းကဘာဆိုလိုတာလဲ ။မယုံဘူးဆိုတာ မမေဘာမှ
မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တာလား။သတင်းဖုံးကွယ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြော
ချင်တာလဲ။ သားဖြူကလည်းသူ့ ကွန်ပျုတာဆိုင် လိုင်စင်မရှိလို့ သတိပေးခံ၇တာဆို ။ ဘာတွေလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကြပါ။
well...leave her alone for some time. dont make it big.
if she is safe n fine, that's okay.
ကျနော် ဒီဖြေရှင်းချက်ပို့စ်ကို တင်ရတဲ့ အကြောင်း နှစ်ချက် ရှိပါတယ်။
(၁) မမေအတွက် စိတ်ပူပန်နေကြတဲ့ ပရိသတ်များ စိတ်အေးဖို့…။
(၂) မလိုအပ်ဘဲ ပွ နေတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ကာယကံရှင် မမေမှာ ပိုပြီး အနေရကျပ်မှာကို သက်သာဖို့…။
အဲဒီနှစ်ချက်ကြောင့် ဒီဖြေရှင်းချက်ကို တင်ပါတယ်။ ကျနော် ရေးတင်ခဲ့တဲ့ သတင်းအတွက် ၁၀၀% မှန်ဖို့ ကျနော် တာဝန်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် မမေအတွက် စိတ်ပူပြီး အခု တင်ထားတဲ့ သတင်းကရော အမှန်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ဘာမှ ယုံမှား သံသယ မဖြစ်ဖို့ ပြောလိုပါတယ်။
နောက်တခု…၊ သူ့ဘာသာသူ ကြောက်လို့ ပိတ်ထားတယ်လို့ ပြောသွားတဲ့ အမည်မဲ့ရဲ့ စကားကို ကျနော် မနှစ်မြို့ပါဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာပြည် အနေအထားကို တကယ်တမ်း သိတဲ့လူ၊ တနည်းအားဖြင့် လူသားချင်း စာနာစိတ် ရှိတဲ့လူဆိုရင် ဘလော့ဂ် ပိတ်ရတဲ့ အချက်ကို နားလည်မှာပါ။ တကယ်တမ်း ကြောက်နေတာက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုယ့်နာမည်တောင် ကိုယ်မဖော်ရဲဘဲ လိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။ မမေ ဘလော့ဂ် ပိတ်သိမ်းထားရတာကို ၀မ်းမနည်းချင်နေပါ။ သူ့ပရိသတ်တွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေ ပူပင်နေကြတာကိုတော့ မနှောက်ယှက်ဖို့ ထပ်မံမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ဒီလောက် မရိုင်းဘူးလို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ့်အယူအဆမှန်တယ်ထင်ရင် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ မှတ်ကျောက်အတင်ခံကြည့်ပါ။ ပြည်သူက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Sep 12, 2007, 5:01:00 PM
If she upset about foul comments, she could clear those or disable cbox rather than shutting down blog. I'm quite skeptical about ur reason but even so if that were the true reason, i would like to request her to rerun the blog. It doesnt make any sense to react that way just bcoz of handful of brainless scums messing the board.
ကရောတကယ့်အစစ်အမှန်လို့ သေချာချာပြောနိုင်လို့ လား။
တွေ့ ကရာနာမည်နဲ့ ဝင်ရေးသွားတာထက်စာရင် နာမည်ရေးမသွားတာကပိုပြီးရိုးသားတယ်လို့ ထင်တာဘဲ။
ကဲနာမည်ရေးမှရဲရင့်တယ်လို့ ထင်နေသူကိုေ၇ွဖားစည်အတွက်။ ကဲဘယ်လိုလဲကျေနပ်လား။နာမည်ပြောပြီးပြီဆိုတော့
Sep 12, 2007, 7:55:00 PM
ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်။ စိတ်ကို အေးအေးထားလိုက်ပါအုံး။ :)
Sep 12, 2007, 7:59:00 PM
Sep 12, 2007, 8:28:00 PM
Sep 13, 2007, 9:59:00 PM